Triangular elingunxande pyramid ivolumu wokubala, wokubala inthanethi, converter
Triangular elingunxande pyramid ivolumu wokubala ikuvumela ukuba uthole ivolumu ezahlukene imibhoshongo, ezifana ntathu, aboncamane futhi yiziphi ezinye izinhlobo imibhoshongo, by amafomula ezahlukene.
Uhlobo iphiramidi umthamo sibalo
By base indawo Ngoba pyramid avamile zikanhlangothiningi Ngoba pyramid avamile esingunxantathu Ngoba pyramid avamile elingunxande Ukuze uthole Tetrahedron
Ukuphakama: Indawo Base:
Ukuphakama: Side Base: Number of base ezinhlangothini:
Ukuphakama: Side Base:
Edge of a Tetrahedron:
Pyramid kuyinto polyhedron ezakhiwe xhuma base zikanhlangothiningi futhi iphuzu, ebizwa ngokuthi isihloko. base ngasinye emaphethelweni bese ifomu isihloko calantsatfu, okuthiwa i-lateral ubuso. It is a okuqinile conic base zikanhlangothiningi. —
h - Ukuphakama ocijile
S - Base indawo
Pyramid Regular iyinhlangano iphiramidi ejwayelekile ogama base kuyinto ipholigoni avamile.
a - Base side
n - Isibalo hlangothi base
Pyramid Regular esingunxantathu kuyinto iphiramidi unxantathu kwesokudla-angled phansi yayo extruding up to iphuzu elilodwa.
Pyramid avamile wamaqhuqhuva kuyinto mbhoshongo nge base square futhi ubhekene ilingana isosceles onxantathu.
Tetrahedron kuyinto polyhedron eyakhiwa obune elingunxantathu, imiphetho eziyisithupha eziqondile, namathe vertex emagumbini amane.
a - Onqenqemeni Tetrahedron